Resaky ny mpitsimpona akotry : indrisy, sery tsy vitan’anamalaho, nefa tsy manana akoho hovonoina, halain-dro | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : indrisy, sery tsy vitan’anamalaho, nefa tsy manana akoho hovonoina, halain-dro
Nirongatra samy nihazakazaka nividy ireny fehi-vava sy vavorona ireny ny olona izay nanam-bola handoavana izany. Mananintanina hono ny loza, ka may ny rehetra, samy nanao an’izay afany hiarovana ny tenany. Tsy tokony ho sodokan’
iny fiarovana kely iny ka hanantena fa voasoroka noho izay ny lozan’ny fifindran’ny pesta. Tsy afaka hiraviravy tànana fotsiny koa fa ny loza ity efa mananintanina. Tsy hita sady tsy henon’ny maro ny hetsika sy ezaka ataon’ny fanjakana, hany ka ny ankabeazan’ny mponina dia mihevitra fa toy ny kamboty velon-dray ny vahoaka. Mifandimby mitrena ny mpitondra fa matetika dia vitan’ny fifaninanana amin’ny fifanilihana andraikitra mikasika ny fisehon’ity loza mitady handripaka ity. Hoatra ny hoe tsy nampoizina ny fihanak’io aretina io, na efa mila ho am-bolana izay no nanaovany fangalapiery teto amin’ny Nosy. Anio any antsinana no mamely, ny ampitso injay heno fa any andrefana no miseho, tsy ela avy teo dia tsapa fa nananika eto afovoan-tany… Tsy honohono fotsiny fa porofon’ny fandalovany dia amelany takaitra sy faty izay toerana vangiany.
Very hevitra ny vahoaka. Ny resaka mandeha, mampita sady mampitombo hatrany an’izao karazan-kevitra sy tsaho ifangaroan’ny diso sy ny marina izao. Indray andro ihany dia nihena ny isan’ny olona mampiasa an’ilay fehivava, lany bala ê, andanin’izany any amin’ny mpivarotra ritra iny entana iny noho ny fetezan’ny tsena tsy araky ny nampoizina. Ho aiza indray izao hoy ny mponina? Sady lany hevitra no ritra finoana amin’ny fitondrana ka hany sisa atao dia miandry ny fidonany toy ilay Rafotsy very laona.
Ny fandrarana famoriam-bahoaka ankalamanjàna no fepetra noraisin’ny mpitondra. Toy ny fifadiana fotsy fotsiny anefa no hany mety aterak’izany. Aiza no misy sehatra ifanakalozana fofon’aina sy piti-drora toy ny eny an-tsena, eo am-piadim-barotra ?
Eny an-dàlambe sy any anaty làlankely ivezivezen’ny maro noho ny adidiny dia tsy ilaozan’ny fako mivangongo sy rano maloto miandrona na mikoriana miadana, eny antsefatsefany eny koa mampivily làlana mba tsy andiganana azy. Indraindray ahitana fatim-boalavo na fatin’alika mitsirara, foarabe fihaonan’ny lalitra kerimesy ipitipihan’ny parasy. Tsy ny biby ihany anefa no mandoto ny rivotra sy ny tontolo, misy toerana mampitampin’orona rehefa andalovana… Tsy amanin’olon-tokana sendra poritra no midofaka toy ireny. Aoka re e! Lany manja no sady mitongilana ho lany hasina Iarivo! Ny olona sisa hany afaka hino fotsiny dia izay minia mitampimaso.